Thursday February 13, 2020 - 16:15:13 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Waxan Halkan Hambalyo mug iyo miisaan culus uga dirayaa Caleema-saarka Suldaan Maxamed Cabdilaahi Axmed (Sul.Maxamed Ciroole)oo maalmaha soo socda lagu caleeema-saari doono degmada Sabawanaag ee gobolka Maroodi-jeex.
Suldaan Maxamed Cabdilaahi Axmed (Sul.Maxamed Ciroole)oo kamid ahaa mujaahidiintii xoriyada dalka usoo dagaalamay isla markaasina qayb-weyn kasoo qaatay, dadaaladii dib-u-heshiisiinta beelaha Somaliland iyo dib u dhiskii dalka, ayaa waxa uu 25-kii sano ee ugu danbaysay kamid ahaa ganacsatada dhinaca xoolaha ee dalka.
Suldaan Maxamed Cabdilaahi Axmed (Sul.Maxamed Ciroole)oo ku caana sharaf iyo karaamo shaqsiyadeed iyo hal-adayga daacadnimo ku dheehantay, ayaa bulshadu aad ugu diirsadeen, markii ay soo gaadhay shaacinta xaflada caleema-saarka Suldaanka, oo beeshiisu u cugatay, inuu noqdo Suldaankooda iyo hogaamiyahooda dhaqanka. Waxaana maalmihii u danbeeyey aad looga dareemayaa caasimada Hargeysa iyo nawaaxigeedaba, qaban-qaabada munaasibada caleemo-saarka Suldaanka oo kasoojeeda, beel kamida beelaha ugu miisaanka culus gobolka maroodi-jeex, gaar ahaana, Caasimada Hargeysa iyo degmooyinka Sabawanaag iyo Cadaadley.
Guntii iyo gabagabadii waxan ilaahay uga baryayaa, Suldaan Maxamed Cabdilaahi Axmed (Sul.Maxamed Ciroole)in uu ku asturo xilkaas, culus ee loo cumaamaday.